Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများစျေး - HBOT စျေး Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး
Home/ရောင်းမည် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT/Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများစျေး - HBOT စျေး Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး
Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများစျေး - HBOT စျေး Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးteknamfg2018-01-02T11:34:29+00:00
ရောင်းမည် Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်များ
ရောင်းမည်မိုဘိုင်း Hyperbaric ကုန်သည်များ
ရောင်းမည်ပို့ဆောင်ရေး Hyperbaric ကုန်သည်များ
ထိခိုက်စေသည်ဟုအများအပြားအချက်များရှိပါသည် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း စျေးနှုန်း။ စျေးနှုန်းအများစုမှာမူကွဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဘို့ရွေးကောက်ရွေးချယ်စရာများ၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်များမှာ Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး ကုန်သည်ကြီးများအသင်းစနစ် (HBOT) ။ အခြားအ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများစျေးမူကွဲအထူးသွတ်သွင်းလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်နိုင်ငံတကာရေကြောင်းကနေရလဒ်။ $
အောက်ပါသည်အလွန် Monoplace Hyperbaric ကုန်သည်များနှင့် Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်များအဘို့အ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများစျေးကိုထိခိုက် Cha ကြောင်း options များဖြစ်ကြသည်။
ကရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဖြစ်ပါသည် - ASME? PVHO? အမျိုးသားဘုတ်အဖွဲ့? FDA က?
ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်များ grade သံမဏိ, grade လူမီနီယမ်, ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် acrylic ကနေတည်ဆောက်ထားကြသဖြင့်, ဖိအား Composite အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်များအနေနဲ့ ASME PVHO (ဖိအားသင်္ဘောလူ့နေထိုင်မှုအတွက်) ဖိအားသင်္ဘောဆိုင်ထဲမှာလုပ်ကြံနေကြတယ်။
ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်များ Radiographically စမ်းသပ်ခံရ 100% ဟာသူတို့ရဲ့ဂဟေ၏အားလုံး (အပြစ်အနာအဆာများနှင့်ပါဝင်နိုင်ဘို့ X-rayed) ရှိသည်ဟု
ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်များ Hydrostatically သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖိအားကျော်လွန်စမ်းသပ်ခံရနေကြသည်။
ရီးရဲလ် Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်များအနေနဲ့ Approved FSS (မီးသတ်နှိမ်နင်းရေးစနစ်) များ
ရီးရဲလ် Hyperbaric ကုန်သည်များအများအားဖြင့်, နိမ့်ဆုံးမှာ 3.0 ATA မှလုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလိမ့်မည်သို့မဟုတ် 29.4 PSI
အပျော့စားအိတ်ဆောင်ငွေဖောင်းပွမှု, 1.5 ATA သို့မဟုတ်7psi အခန်းများတကယ်ရှိပါတယ် Gamow အိတ် ပြီးရိုးရာအခန်းထဲက၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပါဘူး။
Monoplace Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းစျေးနှုန်း:
မျက်နှာဖုံးစနစ်ဖြင့်လက်စွဲစာအုပ် Air ကိုလူငယ်များသို့
အလိုအလျောက် Air ကိုလူငယ်များသို့ Solenoids
Multiplace Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းစျေးနှုန်း:
လူပျို Lock ကို
နှစ်ချက် Lock ကို
Tripple Lock ကို
အရှည်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. ကိုအလွန်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Lock ကို
Entertainment က System ကို
Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကုန်ကျစရိတ် | Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများစျေး